Arday ka qalinjebisay Jaamacada Plasma Jowhar oo shahaadooyin la guddoonsiiyay - Jowhar Somali news Leader
Home News Arday ka qalinjebisay Jaamacada Plasma Jowhar oo shahaadooyin la guddoonsiiyay
Arday ka qalinjebisay Jaamacada Plasma Jowhar oo shahaadooyin la guddoonsiiyay
Arday soo dhamaysatay waxbarashada heerka koowaad ee Jaamacada Plasma ee magaalada Jowhar ayaa maanta la guddoonsiiyay shahaadooyinkooda,iyadoo munaasabada qalin jebintana ay ka soo qeybgaleen mas’uuliyiin heer gobol iyo heer dowlad goboleed ah.Munaasabada guddoonsiinta shahaadooyinka ayaa waxaa ka soo qeybgalay mas’uuliyiin ay ka mid ahaayeen guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Baarlamaanka Hirshabelle Marwo Canab Axmed Ciise,wasiiro,xildhibaano iyo mas’uuliyiin ka socotay maamulka degmada Jowhar iyo kan gobolka Sh/dhexe.
Ugu horeyntii waxaa ka hadlay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka iyo Macalimiinta Jaamacada Plasma faraca Jowhar iyagoo ka warbixiyay dadaalka ay sameeyeen ardayda ka qalinjebinaysa kulliyadaha beeraha iyo Kalkaaliyaasha caafimaadka mudadii ay wax baranayeen.
“Dufcadan waa tii labaad ee ka qalinjebisa kulliyadaha beeraha,sheybaarka iyo kalkaaliyaasha ee Jaamacada Plasma faraceeda Jowhar.”ayuu yiri Ustaad Cabdiraxmaan Yabarow oo kamid ah mas’uuliyinta Jaamacada Plasma ee magaalada Jowhar.
Guddoomiye ku xigeenka gobolka Sh/dhexe Maxamed Cabdi Sheekh iyo guddoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtaar ayaa u hambalyeeyay ardaydan iyagoo ku dhiirigeliyay inay shacabkooda uga faa’ideeyaan aqoontii ay barteen.
Ugu dambeyntii waxaa ka hadashay xafladan guddoomiye ku xigeenka 2aad ee baarlamaanka Hirshabelle Canab Axmed Ciise waxayna u mahad celisay Jaamacada Plasma oo dadaal dheer u gashay sidii ardayda Hirshabelle ay u heli lahaayeen waxbarasho heer jaamacadeed iyagoo la joogo waalidiintooda.
“Waxaan ku ammaanayaa Jaamacada Plasma inay ardayda Hirshabelle u sahashay waxbarashadooda waxaana aan ka codsanayaa inay sii kordhiyaan dadaalkooda.”ayay tiri marwo Canab Axmed Ciise.
Jaamacada Plasma waa jaamacadii ugu horeysay ee ka hirgelisa kulliyad lagu barto cilmiga Beeraha gobolka Sh/dhexe oo ah dhul caan ku ah wax soo saarka beeraha iyadoo maantana la guddoonsiiyay shahaadoyin heer Jaamacadeed ah dufcadii labaad ee ka qalinjebisa kulliyadda beeraha.
qalinjebinta dufcada labaad ee Plasma Jowhar